Vaovao - Fahalalana fototra RFID
RFID fahalalana fototra
1. Inona no atao hoe RFID?
RFID dia fanafohezana ny Radio Frequency Identification, izany hoe, famantarana ny onjam-peo. Matetika izy io dia antsoina hoe chip elektronika inductive na karatra akaiky, karatra akaiky, karatra tsy misy fifandraisana, marika elektronika, barcode elektronika, sns.
Ny rafitra RFID feno dia misy ampahany roa: Reader sy Transponder. Ny fitsipiky ny asa dia ny Reader mampita matetika ny onjam-peo tsy manam-petra angovo ny Transponder mba hitondra ny Transponder faritra mba handefa ny anatiny ID Code. Amin'izao fotoana izao dia mahazo ny ID ny mpamaky. Code. Ny Transponder dia miavaka amin'ny tsy fampiasana batterie, fifandraisana ary karatra swipe ka tsy matahotra ny loto, ary ny tenimiafina chip no hany tsy azo adika eto amin'izao tontolo izao, manana fiarovana avo lenta ary maharitra.
Ny RFID dia manana fampiharana marobe. Ny fampiharana mahazatra amin'izao fotoana izao dia misy poti-biby, fitaovana miady amin'ny halatra amin'ny fiara, fanaraha-maso ny fidirana, fanaraha-maso ny toeram-piantsonan'ny fiara, automation amin'ny tsipika famokarana ary fitantanana fitaovana. Misy karazany roa ny RFID tags: active tags sy passive tags.
Ity manaraka ity ny rafitra anatiny amin'ny tenifototra elektronika: kisary schematic ny firafitry ny chip + Antenna sy ny rafitra RFID
2. Inona no atao hoe marika elektronika
Ny mari-pamantarana elektronika dia antsoina hoe marika famantarana ny onjam-peo ary famantarana famantarana ny onjam-peo amin'ny RFID. Izy io dia teknolojia famantarana mandeha ho azy tsy mifandray izay mampiasa mari-pamantarana onjam-peo mba hamantarana ireo zavatra kendrena sy hahazoana angon-drakitra mifandraika. Ny asa famantarana dia tsy mitaky fitsabahan'ny olombelona. Amin'ny maha dikan-teny tsy misy tariby amin'ny barcodes, ny teknolojia RFID dia manana ny tantera-drano, antimagnetic, ny mari-pana ambony, ary ny fiainana maharitra, ny halaviran'ny famakiana lava, ny angon-drakitra amin'ny marika dia azo encryption, ny fahafaha-mitahiry angon-drakitra dia lehibe kokoa, ny fampahalalana momba ny fitehirizana dia azo ovaina malalaka ary ny tombony hafa. .
3. Inona no atao hoe teknolojia RFID?
Ny famantarana ny onjam-peo RFID dia teknolojia famantarana famantarana mandeha ho azy tsy mifandray, izay mahafantatra ho azy ny zavatra kendrena ary mahazo angon-drakitra mifandraika amin'ny alàlan'ny famantarana ny onjam-peo. Ny asa famantarana dia tsy mitaky fandraisana an-tanana ary afaka miasa amin'ny tontolo masiaka isan-karazany. Ny teknolojia RFID dia afaka mamantatra zavatra mihetsika haingana ary afaka mamantatra marika maromaro miaraka amin'ny fotoana iray, ary haingana sy mety ny fandidiana.
Tsy matahotra ny tontolo masiaka toy ny tasy menaka sy ny fandotoana vovoka ny vokatra azo avy amin'ny onjam-peo fohy. Azon'izy ireo atao ny manolo ny barcode amin'ny tontolo toy izany, ohatra, mba hanaraha-maso zavatra eo amin'ny tsipika fivorian'ny orinasa iray. Ny vokatra matetika amin'ny onjam-peo lavitra dia matetika ampiasaina amin'ny fifamoivoizana, ary ny halaviran'ny famantarana dia mety hahatratra am-polony metatra, toy ny fanangonam-bola mandeha ho azy na famantarana fiara.
4. Inona avy ireo singa fototra amin'ny rafitra RFID?
Ny rafitra RFID fototra indrindra dia misy fizarana telo:
Tag: Izy io dia ahitana singa sy puce. Ny tag tsirairay dia manana kaody elektronika tokana ary mifamatotra amin'ilay zavatra mba hamantarana ny zavatra kendrena. Mpamaky: Fitaovana mamaky (ary indraindray manoratra) fampahalalana momba ny marika. Natao ho tànana na raikitra;
Antenna: Mandefa famantarana matetika amin'ny radio eo anelanelan'ny tag sy ny mpamaky.
Fotoana fandefasana: Nov-10-2021